Ny 8,6 % amin’ireo no niharan’ny herisetra ara-pananahana nanomboka teo amin’ny faha-15 taonany raha tsy sahy mitantara ny zava-nanjo azy ny 10 %. Anisan’ny manampy sy manohana azy ireny ny tetikasa Ranavalona izay karakarain’ny Ecpat France. Ankizy miisa 92, 13 ka hatramin’ny 18 taona no efa noraisiny an-tanana ka nisy ny fanenjehana ara-pitsarana ho an’ireo nahavanon-doza, arahin’ny tohana ara-môraly ireo ankizy noraisina an-tanana. Teo ihany koa ny fijerena ny lafiny ara-ekonomia mba hahafahan’izy ireny miarina. Nisy ihany koa ireo naverina nianatra any an-tsekoly. An-dalam-pamerenana ireny ankizy ireny eny anivon’ny fiarahamonina ny Ecpat France ankehitriny. Miezaka ny manentana ny mpiara-belona izy ireo tsy hanilika azy ireny fa handray am-pitiavana ary hanabe azy araka izay tratra. Nisy ny fanentanana izay notanterahin’izy ireny teny Androhibe ny faran’ny herinandro teo, fokontany iray misy amin’ireo ankizy izay tohanany sy areniny. Tsiahivina moa fa hifarana amin’ny volana aprily ho avy izao ity tetikasa Ranavalona ity.